Mpanamboatra sy mpamatsy latabatra ambany scissor | China Low Scissor Lift latabatra Factory
Ny tombony lehibe indrindra amin'ny latabatra fiakarana ambany momba ny scissor ambany dia ny 85mm ihany ny haavon'ny fitaovana. Raha tsy misy forklift dia azonao atao ny mampiasa mivantana ny kamio pallet hisintona ny entana na ny paletety amin'ny latabatra amin'ny alàlan'ny tehezan-tendrombohitra, hitsitsy ny vidin'ny forklift ary hanatsara ny fahombiazan'ny asa.
Ny latabatra fanondranana hety amin'ny lozam-pifamoivoizana dia matetika ampiasaina handefasana entana ao anaty kamio, aorian'ny fametrahana ny lampihazo ho any an-davaka. Amin'izao fotoana izao, ny latabatra sy ny tany dia amin'ny ambaratonga iray ihany. Aorian'ny famindrana ny entana amin'ny lampihazo, atsangano ny lampihazo, avy eo azontsika atao ny mamindra ny entana ao anaty kamio.
Ny latabatra fampiakarana hety U dia ampiasaina amin'ny fampiakarana sy ny fikirakirana ny paleta hazo ary ny asa fikirakirana fitaovana hafa. Ny sehatry ny asa lehibe dia ny trano fanatobiana entana, ny asan'ny tsipika fivoriambe ary ny seranan-tsambo. Raha tsy mahafeno ny fepetra takinao ny maodely mahazatra, azafady mba mifandraisa aminay mba hahitana raha afaka